शीट संगीत र पाठ हे तान्नेब्राम प्रिन्टरको लागि मुद्रण
हे क्रिसमस रूख - टिप्पणी र पाठ
हे क्रिसमस रूख - पाठ
शीट संगीत र पाठ ओ क्रिसमस रूख
हे क्रिसमस रूख, ओ क्रिसमस रूख,
तपाईंको पात कसरी हराउँछ?
तपाईं गर्मी को समय मा हरे रंग को न केवल,
होइन, सर्दमा पनि, बर्फिङ गर्दा:
तपाईंको पात हरी कस्तो छ?
मलाई साँच्चै मन पर्छ!
प्राय: क्रिसमस समयमा छैन
तपाईंका रूख मलाई आनन्दित हुनुहुन्छ!
तपाईंको पोशाक मलाई केहि सिकाउन चाहन्छ!
आशा र स्थायीता
कुनै पनि समयमा सान्त्वना र शक्ति दिन्छ!
क्रिसमस क्यारोल हे ट्याननबामम को ग्राफिक फाइलको रूपमा पाना खोल्नुहोस्